UmShumayeli 5 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
Yiba nokwesaba okufanele lapho usondela kuNkulunkulu (1-7)
Abaphansi babhekwe abasezikhundleni eziphakeme (8, 9)
Ukuba yize kwengcebo (10-20)
Abathanda imali abaneliseki (10)
Ubuthongo besisebenzi bumnandi (12)
5 Qapha indlela ohamba ngayo noma nini lapho uya endlini kaNkulunkulu weqiniso; + kungcono ukusondela ukuze uzolalela + kunokunikela ngomhlatshelo njengoba kwenza iziphukuphuku, + ngoba azazi ukuthi ezikwenzayo kubi. 2 Ungasheshi ukhulume noma uvumele inhliziyo yakho ikhulume ngamawala phambi kukaNkulunkulu weqiniso, + ngoba uNkulunkulu weqiniso usemazulwini kodwa wena usemhlabeni. Yingakho amazwi akho kufanele abe mbalwa. + 3 Ngoba iphupho liba khona ngenxa yemisebenzi eminingi, + nokulanda okungapheli kwesiphukuphuku kuba khona ngenxa yamazwi amaningi. + 4 Noma nini lapho wenza isifungo kuNkulunkulu, ungephuzi ukusifeza, + ngoba akajabuli ngeziphukuphuku. + Feza isifungo sakho. + 5 Kungcono ungasenzi isifungo kunokwenza isifungo kodwa ungasifezi. + 6 Ungavumeli umlomo wakho ukuba ukwenze wone, + futhi ungasho phambi kwengelosi* ukuthi kwakuyiphutha. + Kungani uthukuthelisa uNkulunkulu weqiniso ngalokho okushoyo kuze kudingeke abhidlize umsebenzi wezandla zakho? + 7 Ngoba njengoba nje imisebenzi eminingi yenza kube khona amaphupho, + namazwi amaningi aholela ezeni. Kodwa yesaba uNkulunkulu weqiniso. + 8 Uma ubona noma yikuphi ukucindezelwa komuntu oswele nokuhlanekezelwa kobulungisa nokulunga esifundeni sakho, + kungakumangazi lokho. Ngoba leso sikhulu esiphakeme sibhekwe ophakeme kunaso, futhi kukhona nabanye abaphakeme kunabo. 9 Inzuzo yomhlaba ihlukaniswe phakathi kwabo bonke; ngisho nezidingo zenkosi zinakekelwa ngomkhiqizo wensimu. + 10 Umthandi wesiliva ngeke aneliswe isiliva, nomthandi wengcebo ngeke aneliswe umholo. + Nalokhu futhi kuyize. + 11 Lapho izinto ezinhle ziba ziningi, bayanda nalabo abazidlayo. *+ Umnikazi wazo uzuzani, ngaphandle kokuzibuka ngamehlo? + 12 Bumnandi ubuthongo besisebenzi, kungakhathaliseki ukuthi sidla okuncane noma okuningi, kodwa inala yocebile ayimvumeli ukuba alale. 13 Kukhona inhlekelele enkulu engiyibonile phansi kwelanga: ingcebo egcinwe umnikazi wayo elimaza yena ekugcineni. 14 Leyo ngcebo yalahleka ngenxa yomsebenzi ongaphumelelanga, futhi lapho ezala indodana, akabe esaba nalutho. + 15 Njengoba nje umuntu aphuma engenalutho esibelethweni sikanina, kuyoba njalo nalapho efa. + Ngeke akwazi ukuhamba nalutho alusebenzele kanzima. + 16 Nalokhu futhi kuyinhlekelele enkulu: Njengoba nje eza, uyohamba kanjalo futhi; utholani-ke lowo oqhubeka esebenzela umoya kanzima? + 17 Nsuku zonke udlela ebumnyameni ekhathazeke kakhulu, egula futhi enolaka. + 18 Nakhu engikubone kukuhle futhi kufaneleka: ukuba umuntu adle aphuze futhi ajabule ngawo wonke umsebenzi wakhe onzima + awenza phansi kwelanga efukuza ngezinsukwana zokuphila kwakhe uNkulunkulu weqiniso amnike zona, ngoba lowo umvuzo* wakhe. + 19 Lapho uNkulunkulu weqiniso enika umuntu ingcebo + futhi emenza akwazi ukuyijabulela, kufanele athathe umvuzo* wakhe, ajabule ngomsebenzi wakhe onzima. Lesi isipho sikaNkulunkulu. + 20 Ngoba ngeke akunake* kakhulu ukudlula kwezinsuku zokuphila kwakhe, ngoba uNkulunkulu weqiniso uqhubeka emnika intokozo enhliziyweni yakhe. +
^ Noma, “kwesithunywa.”
^ Noma, “abazisebenzisayo.”
^ Noma, “akukhumbule.”